ဇွန်လ 2018 | တစ်ဦးကရထား Save
လ: ဇွန်လ 2018
နေအိမ် > ဇွန်လ 2018
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ Flam ထံမှ Myrdal ဖို့ Flam မီးရထားလမ်းကမ္ဘာပေါ်မှာအလှဆုံးရထားခရီးတဦးဖြစ်ဖို့နဲ့ကျနော်တို့အဘယ်ကြောင့်နားလညျနိုငျဟု. အဆိုပါခရီးသာတစ်နာရီကြာပေမယ့်ရှုခင်းအမှန်တကယ်အသက်ရှု-ဆည်းပူးနေဖြစ်ပါတယ်. လာရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါမှာဒီအတွေ့အကြုံကိုလက်လွတ်မနေပါနဲ့…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ သငျသညျစပိန်ဖြုန်းဖို့နှစ်ပတ်အတွင်းရှိပါက, လှည့်ပတ်ရဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုရထားအားဖြင့်စပိန်စူးစမ်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်. မသာဤသူသည်သင်တို့တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းအချို့မယုံနိုင်စရာမြင်ကွင်းများကိုမြင်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်စပိန်အတွက်မီးရထားခရီးသွားလာအလွန်ထိရောက်သောဖြစ်ပါသည်…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ အသစ်ရထားလိုင်းကိုစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်, အဇာဘိုင်ဂျန်ဖုံးအုပ်, ကြက်ဆင်, နှင့်ဂျော်ဂျီယာ. အဆိုပါလိုင်းကျော်ဖုံးလွှမ်း 820 ကီလိုမီတာနှင့်ခရီးသည်တင်ရထားအပြင်ကုန်တင်ပြီးရှိကြတယ်. ပထမဦးစွာ, မျဉ်းရုရှားကကျော်လွှားနေတုန်းဥရောပနှင့်တရုတ်ချိတ်ဆက်ဖို့ပထမဦးဆုံးဖွစျလိမျ့မညျ. ရထားကနေလည်ပတ်မှာပါ…
စာဖတ်ချိန်:3မိနစ်များ ဥရောပတစ်ဝှမ်းခရီးသွားလာမှုအတွက်ရထားအကြံပေးချက်များခရီးသွားများအတွက်မရှိမဖြစ်များမှာ. ပထမဦးစွာ, ဥရောပခရီးအဘို့များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်. သငျသညျအဆင်းလှတံတားများကြည့်ဖို့လိုပေမည်, မီးရထားဘူတာ, နှင့်အညီအမျှရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာရှုခင်း. သို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းသင်အီတလီနိုင်ငံရဲ့အံ့သြဖွယ်ယဉ်ကျေးမှုကြည့်ဖို့ခရီးသွားလာနေသော. အပေါ်…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဘူဒါပက်ဆက်ဆက်ဟန်ဂေရီ၏အချက်အချာဖြစ်ပါသည်. ကဘူဒါပက်အတွက်ရထားဖြင့်ခရီးသွားခြင်းမှကြွလာသောအခါ၎င်းသည်အများအပြားရထားရှိပါတယ်ဗဟိုအချက် Stop င်. ဘူဒါပက်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ရထားများကခရီးသွားစိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်မကြာခဏများစွာသောလူအဘို့အသစ်တစ်ခုအတွေ့အကြုံနေစဉ်,…